Ejipta: Fampiasana amin’ny tsy tokony ho izy ny World Wide Web, Manampahefana mitory ireo mafana fo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2010 12:17 GMT
Ny Sabotsy 22 May 2010 ny Fitsarana ady heloka ao AlKhalifa no handinika ny raharaha 8260/2009 , izay anenjehan'ny mpitsara Abdel Fattah Mourad an-dry Ahmed Seif – Talen'ny Hisham Mubarak Law Center (HMLC), Gamal Eid – Talen'ny Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) ary ilay mpitoraka blaogy Amr Gharbeia ho “naniratsira, nanala baraka, nanamby, nanaratsy sy nanaraotra ny tolotra aterineto”.
Ilay mpitsara izay nangataka, tany amin'ny taona 2007 tany, ny hanakanana tranonkala sy blaogy miisa 51, dia miampanga an'i Gharbeia ho namoaka ary tsy namafa fanamarihana vitsivitsy “manivaiva” napetrak'ireo mpitsidika ny blaogy. Seif, Eid ary Gharbeia dia samy enjehina ho nampiasa tsy ara-dalàna ny fitaovan-tserasera ka isan'izany ny antso ampitain-davitra (telefaona) sy ny World Wide Web!.
Ity tranga ity dia iray ao anatin'ny maro amin'ireo tranga noforonin'i Abdel Fatah Murad hamelezana ny HMLC, ANRHI ary indrindra koa hamelezana ireo mpitoraka blaogy, ireo mpiaro ny zon'olombelona ary ireo tranonkalam-baovao.
Ny Tambajotra Arabo Mpandinika ny Zon'olombelona dia niteny hoe:
Ity mpitsara ity dia efa namorona fanenjehana an'i Gamal Eid sy ireo mpitoraka blaogy, Manal Hassan sy Alaa Seif tamin'ny 2007 noho ny fanivaivana sy fanalam-baraka. Samy afaka tamin'ny Fitsarana ambaratonga voalohany sy ny Fampakarana Fitsarana ambony izy telo ireto rehefa azon'ny fitsarana antoka ny famoromporonana.